Zvitsuwa Zvakanakisisa uye Mahombekombe muMalaysia | Kufamba Nhau
Zvitsuwa zvakanakisa nemabhichi muMalaysia
Mariela Carril | | Islands, Malasia, Kufarira, Asia kufamba
Southeast Asia ine inoshamisa nzvimbo uye ndinotenda kuti akanakisa mahombekombe uye zvitsuwa pasi rese zviripo. Iyo inzvimbo iri kure, maawa mazhinji ekubhururuka, asi mubairo wakanaka saka zvakakosha kukwira mundege uye kufamba imwe nguva.
Malasia Ihwo humambo hwebumbiro hwakaumbwa nenzvimbo dzinoverengeka dzine guta guru Kuala Lumpur. Iine huwandu hwevanhu vanosvika mamirioni makumi matatu vanhu saka ndiyo imwe yenyika dzine vanhu vazhinji mudunhu iri. Rinokosha izwi rinoshandiswa nevakawanda kutsanangura nyika ino. Tsvaga nei!
1 Zvitsuwa zvakanakisa muMalaysia
2 Mhenderekedzo dzakanakisa muMalaysia
Zvitsuwa zvakanakisa muMalaysia
Zvitsuwa zveMalaysia ivo vakasiyana kwazvo saka pane chimwe chinhu kune ese marudzi evafambi asi kana iwe uchida zuva negungwa, kupihwa kwacho kunoshamisa. Chero sarudzo ichave yakasvinwa nemaonero ako ega, asi zviri sekutaura kwandataura pamusoro, unofanirwa kufamba uye kuzvitsvagira wega.
Pakati pezvitsuwa zvakanakisa pane Perhentian. Ivo vari kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kwemahombekombe ePeninsular Malaysia uye vari nzvimbo huru pakati pevanoenda kumashure wenyika. Ivo vane yakajeka mvura uye ndosaka uchigona enda snorkelling nhanho kubva kumahombekombe uye unakidzwe neakapfuma mhuka dzegungwa.
Kubva kumisha yekuredza unogona kukwira chikepe uye kuenda kunofamba kuenda ona hove uye hove dzegungwa kana kunakidzwa nekuvira kwezuva. Pasina kutaura kurasika mukuvira kwezuva wakarara wakakomberedza moto.
Kune pekugara dzese mhando nemitengoKubva pane dzinodhura senge Tuna Bay chitsuwa Resort kune dzakachipa dzakadai saAbdul Chalet. Kuti usvikeko unofanirwa kutora bhazi muKuala Lumpur, kuHentian Putra Station, uye kufamba maawa mapfumbamwe. Kana kubhururuka kubva kuguta guru kuenda kuKota Bharu uye kutora tekisi kuenda Kuala Besut pamhenderekedzo.
Tioman icho chimwe chitsuwa chakanakisa. Iyo inozivikanwa kwazvo mumusika wevashanyi sezvo Time magazini yakabhabhatidza se chitsuwa chakanakisa pasi rese mune makumi manomwe. Tourism yakachinja zvishoma kubva ipapo asi misha ichiri inonakidza uye kupihwa kwekugara kwakasiyana.
Iwe unogona kusvika ikoko nechikepe kubva kuSingapore kana nebhazi kubva chero kupi muMalaysia kuenda kuMersing uye kubva ipapo unotora maawa maviri echikepe kukwira. Kana pane ndege diki kubva Kuala Lumpur futi. Iwe unofarira zveAsia zveumbozha here?
Saka mugumo wakadaro Langkawi. Ngano dzinoti icho chitsuwa chakatukwa, kunyangwe rombo rakachinja apo muma80 zvakatemwa kutungamira hupfumi hwechitsuwa ichi kutashanyi. Chitsuwa chose chiri basa-free saka kubva nhasi zvakanaka.
Izvo zvine mahotera, mahombekombe, maresitorendi, zviitiko zvevashanyi uye zvinoshamisa cableway yemamiriyoni maviri nemazana maviri inosvika pamamita mazana manomwe negumi pakureba uye inobvumidza iwe kuukoshesa mukunaka kwayo kose Panyaya yekugara, unogona kusarudza kubva kuhotera yekutengesa mune yaimbova munda wekokonati kusvika kumwaka mana.
Kusvika ikoko hauzove nedambudziko nekuti kune nendege dzezuva nezuva kubva kwese kwese.
Kune imwe nhoroondo yeMalay uye nhaka yaunogona kuenda Penang, akambofunga nezveParera rekuMabvazuva muBritain Humambo. Yakanga yakakosha mumigwagwa yekutengesa yeChirungu pakati peIndia nedzimwe nyika dzeAsia uye kunyangwe yakawira mukukanganisika neshanduko yezvematongerwo enyika yezana ramakore rechimakumi maviri, yakwanisa kuzvidzokorodza senzvimbo yekushanya.
Georgetown iri Nhaka Yenyika maererano neUNESCO, semuenzaniso, uye hurumende yakaisa mari mukuvandudza zvifambiso zveveruzhinji, kudyara miti mitsva, kugadzira nzvimbo dzevanofamba netsoka uye zviitiko zvetsika. Iyo inozivikanwa kune yayo zvitoro zvekudya mumugwagwa uye vashanyi vanowanzosvika nendege nekuti ine nhandare yenyika.
Kana iwe uchida kudhiraivha, yakanaka kwazvo nzvimbo iri Labuan, chitsuwa chakatsaurirwa mari nezviuru zvemakambani ekunze. Yemari nzvimbo kune chena-kora makororo, isu tinogona kuti, inotove neayo yavo Fomula 1 dunhu.
Asi sekutaura kwandaita, pasi pemvura pane hupfumi hwakavanzika kune vakasiyana uye kune zvikepe zveAustralia, zveAmerica uye kunyange nemhando yemakuva emakuva. Gore rega rega, semuenzaniso, kufa kwemauto e3900 XNUMX eAllied muHondo Yenyika II kunorangarirwa.
Kuti ugare wakasurukirwa, imwe yeaya anoita kuti unyure mupfungwa dzako, pane chitsuwa kubudikidza Layang-Layang. Icho chitsuwa chakazvarwa kubva muvhu chakadzoserwa kubva kugungwa kumisikidza mureza munzvimbo inonzi neChina nedzimwe nyika.
Crystal yakajeka mvura ine yakadzika iyo inodzika zvakanyanya kupfuura mamirioni zviuru zviviri mumahombekombe imwe paradhiso yevakasiyana. Inoverengerwa, kutaura zvazviri, pakati pevanegumi akanyanya kudhiza saiti pasi. Iko kune yakanaka coral reef uye makumi mana emamirioni ekuonekwa akavimbiswa. Uye shark, dolphins, barracudas, turtles, uye stingray.
Imwe mecca yechitsuwa chekudonha iri Sipadan kunyangwe kuitira kuti irege kuisa njodzi kune ecosystem kwenguva yakati ikozvino, vanosvika zana nemakumi matanhatu chete ndivo vanobvumidzwa pazuva. Makorari, zviuru zvehove, shaki, hove zvemarudzi ose uye kune kunyange nzvimbo yemakuva pasi pemvura.
Zvitsuwa Redang, chitsuwa chakazvimiririra Rawa nenzvimbo dzayo dzakanaka dzekutandarira (zvese zviri zvesultan) uye Pulau Pangkor, nemweya wavo wechiMalay wakadzikama vachiri pachinyorwa.
Mhenderekedzo dzakanakisa muMalaysia
Ikozvino kwave kuchinjika kwemahombekombe. Kuve nezvakawanda zvezvitsuwa muMalaysia ipapo kune mazana emahombekombe akanaka uye mazhinji acho haanyatso kuzivikanwa saka akadhura, ane vashanyi vashoma uye akasununguka.
Iyo inonyanya kufarirwa iri kumahombekombe ekumabvazuva kweMalay Peninsula.. Iwo ari nyore kusvika nekuti kune nendege dzakachipa uye ndidzo nzvimbo dzinodiwa dzekuenda kupera kwevhiki. Heano mahombekombe e Redang, iwo ezvitsuwa Perhentian nemapaki egungwa echitsuwa ichi Tioman.
Kune rimwe divi kune iyo mabhishi kumahombekombe ekumadokero kweMalay Peninsula. Ndiri kutaura nezve chitsuwa chisina basa che Langwaki, ine mahombekombe madiki asi akanaka uye nehupenyu hwakawanda hwevashanyi, isina mwaka wemonono unovabata uye nemapopoma asingakanganwiki, mahombekombe echitsuwa Pangkor uye Borneo, chitsuwa chakagovaniswa neMalaysia, Indonesia neBrunei.
Chinhu chakakosha pakushanyira Malaysia nezvitsuwa nemabhichi ndizvo kutiza monsoon. Mwaka wemonesi uri pakati paMbudzi naKurume, kumahombekombe ekumabvazuva. Inonaya yakawanda. Mushure mezvo zvinodikanwa kuunza yakawanda yezuva uye inodzinga zvipembenene.
Zororo, chishuwo chekuva nenguva yakanaka uye kunakidzwa neparadhiso yepanyika zvinoita kwandiri kusiri kuzomboshayikwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » famba » Islands » Zvitsuwa zvakanakisa nemabhichi muMalaysia
Carmina Yébenes Aguilera akadaro
Chinyorwa chinonakidza asi mamonioni haana kujeka kwandiri. Kana ndikaenda muna Gumiguru kune zvitsuwa zvipi zvandinogona kushanyira izvo zvisina mamiriro ekunze akashata?!
Pindura Carmina Yébenes Aguilera
Mazororo emhuri muCatalonia, L'Ametlla de Mar
Chii chaunofanira kuziva kana iwe uchienda kuChile?